Haseho Sa Tsy Haseho Ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2018 3:02 GMT
Ilay Tantara navoakan'ny Tranom-pamokarana lehibe iray ao Hollywood mitondra ny lohateny Memoir of A Geisha dia toa nandalo fahasahiranana raha vao tonga tao amin'ny trano fijerena sarimihetsika tao Shina. Nalaina avy tamin'ny boky best-seller an'i Arthur Golden ilay sarimihetsika izay mitondra io lohanteny io ihany, mitantara ny fiainan'ilay Japone mpandàla ny nentim-paharazana, nandritry ny ady lehibe faharoa. Notontosain'i Rob Marshall izay fantadaza ao Chicago.
Nahatonga resabe tao Shina sy tao Japana ilay sarimihetsika tamin'ny nanomezana ho anà vehivavy Shinoa mpilalao sarimihetsika ny toerana fototra telo maneho ireo vehivavy Japone geisha : Zhang Ziyi sy Gong Li izay samy avy ao Shina, ary Michelle Yeoh avy ao Malezia avy any Hong Kong fa kosa Shinoa ny razambeny .
Ilay sarimihetsika dia voalaza fa nahazo fankatoavana avy amin'ilay andrarezin'ny fandrindràna sarimihetsika Shinoa SARFT (State Administration of Radio, Film and Television), izay taty aoriana dia notsipahan'ireo manampahefana ambony. Mazava ho azy, nahian'ireo manampahefana ireo sao vao aminka hanamafy ny fankahalan'ny Shina ny Japone ilay sarimihetsika . Ny taona 2005, nipoaka ny hetsika ho fanoherana ny Japone teny amin'ny tanàna maro tao Shina taorian'ilay nanitsian'i Japàna ny tantarany voalaza tanaty boky miresaka ny Ady Lehibe Faharoa. Voatery nandràra ilay hetsika ny governemanta alohan'ny tsy hitaran'ilay izy. Sarina taovam-pananahana miboridana izay voalaza fa avy ao amin'ilay sarimihetsika, ahitàna an-dramatoakely Zhang Ziyi, no nipariaka be tanaty aterneto, nanetsika ny fankahalàna ny Japone talohan'ny fivoahan'ilay sarimihetsika. Maneho izany fihetsempo izany an-katezerana, ny blaogera Shinoa iray tamin'ny fanontaniana hoe :
Tsy ny Memoir of A Geisha irery ihany akory no sarimihetsika nokianin'ireo Shinoa mpanivana . Brokeback Mountain, izay tantaram-pitiavan'ireo pelaka cowboy roa lahy niaraka nifampisankambina tsy misy fiafarany tao anatin'ilay sarimihetsika Amerikana nahazo loka tamin'izany vaninandro izany, dia voalaza fa voaràra ihany koa. Nitranga izany, taoriana kelin'ny nanasoasoan'ilay filoha mpitantana Ang Lee an'i Azia ho firenena malala-tsaina amin'ny resaka firaisana ara-nofo. Ny tena marina, A Date With Lu Yu (Lu Yu You Yue), (Fotoana iarahana amin'i Lu Yu) iray amin'ireo fandaharana malaza ao Shina, dia nanindrahindra ilay sarimihetsika Brokeback Mountain tamin'ilay fandaharany manokana” maningotra ny rehetra ny fitiavana ” tao anatin'ny fotoana natokana ho an'ny fiarahan'ny lahy samy lahy ny volana Novambra 2005,
Impiry isika no hamaky ny fanivanana ireo sarimihetsika roa ireo? Shinoa iray mpanao fanadihadiana no nilaza fa ny fanivanana ilay Geisha dia
Ny resaka ao amin'ilay Angry Chinese Blogger no nanohana fa ny fanivanana ny Brokeback dia hevitra avy amin'ireo mpanivana ihany, fa tsy hevitry ny fiarahamonina akory. Ny ankamaroan'ireo filazambaovao Shinoa, anatin'izany ny gazety an'ny fanjakàna, dia samy nihirahira ny hatsaran'ilay sarinihetsika avokoa, araky ny voalazan'ilay fanadihadiana fohy tao amin'ny Sina, vavahadin-tserasera Aterineto lehibe indrindra ao Shina :
6 andro izayLaos